Uyifomatha njani i-iPad xa sifuna ukuyithengisa okanye ukuqala kwasekuqaleni | Iindaba zeGajethi
Uyifomatha njani i-iPad
Ngokuqinisekileyo xa kufuneka sithengise i-iPad sinokungabaza malunga nezixhobo ezigcina ngaphakathi kwaye kuya kwenzeka ntoni ukuba asizicimi kakuhle isixhobo. Ukufomatha i-iPad ngumsebenzi olula Kodwa kuyimfuneko ukuyenza kakuhle ukuze thina nabathengisi, kunye nomthengi ngokwakhe, bangabinangxaki kulo naluphi na uhlobo ekusetyenzisweni.
Xa sifuna ukuthengisa i-iPad kubalulekile ukwenza uthotho lwamanyathelo ukuze kungabikho nto igcinwe kuyo, ke ngoko siya kuthintela lonke ulwazi oluqulathiweyo ukuba lungabonwa ngomnye umntu. Ngokucacileyo, akukho mfuneko yokuthengisa i-iPad ukwenza ifomathi yayo, singayinika isalamane okanye kusenokufuneka siyishiye kwimvelaphi ukuze siqale ngakuqala ngoqwalaselo lwayo. Ke masibone amanyathelo okwenza oku kucoca kwi-Apple yethu ye-Apple.
1 Okokuqala, i-backup
2 Ungazithatha njani iifoto kunye nolunye ulwazi ngesandla
3 Ungayicima njani i-iPad xa sinayo ekhaya
4 Kodwa kuthekani ukuba asinayo i-iPad ngokwasemzimbeni nathi?
Unokucinga ukuba ukuthatha i-backup xa uyokuthengisa i-iPad yinto engasebenziyo kuba ungafuni ukuthenga enye i-iPad okwethutyana. Nangeyiphi ndlela ihlala icetyiswa kwaye inyanzelekile ukuba yenze i-backup Isixhobo sethu, kuba ngale ndlela siya kukuphepha ukulahlekelwa lulwazi xa usicima kwaye singasoloko sisebenzisa olu gcino kwisixhobo kwixesha elizayo.
Ukwenza i-backup sinokusebenzisa i-iTunes okanye ngokuthe ngqo inkonzo ka-Apple iCloud. Into engacetyiswayo kukususa wonke umxholo ngesandla, iifoto, ii-imeyile, abafowunelwa kunye nabanye, ukusukela oko Siza kuphulukana nayo yonke idatha ngonaphakade. Ukwenza i-backup kwi-PC okanye kwi-Mac usebenzisa i-iTunes, kufuneka sixhume i-iPad ngentambo kwaye silandele imiyalelo yokwenza ikopi. Kwimeko ye-iCloud, inokwenziwa kwi-iPad ngokwayo.
Ungazithatha njani iifoto kunye nolunye ulwazi ngesandla
Sinokwenza ikopi ngesandla ukuba sizole ngakumbi ukuba idatha yethu ayizukulahleka kwaye gcina kuphela izinto esizifunayo njengeefoto okanye idatha ethile evela kumanqaku okanye okufanayo. Ayisiyonto inzima ukuyenza kodwa ifuna iPC yayo, kuba kufuneka sibone i-iPad njengeyunithi yokugcina kwaye siqale ukugcina iifoto kunye namanye amaxwebhu kwifolda esizenzela yona.
Eli nyathelo linokweqiwa xa sinesipele esenziwe kwi-iTunes okanye ngelifu le-iCloud okanye nayiphi na inkonzo efanayo, esikholelwa ukuba yeyona ndlela ilungileyo yokungalahli nantoni na.
Ungayicima njani i-iPad xa sinayo ekhaya
Kwaye sinokuyicima idatha kude, kodwa siza kuyibona kamva. Ngoku siza kugxila ekubeni ngokomzimba sine-iPad nathi kwaye sifuna ukususa wonke umxholo ukuze sikwazi ukuwunika, uwuthengise okanye nantoni na. Ngenxa yoku kufuneka landela la manyathelo alula:
Sayina uphume kwi-ICloud, iTunes Store, kunye neVenkile yeApp ye-iPad
Vala iseshoni yeposi kunye nezicelo ezibhalisiweyo
Ukuba usebenzisa i-iOS 10.3 okanye kamva, cofa Useto> [igama lakho]. Skrolela ezantsi kwaye ucofe ukuphuma. Ngenisa igama lokugqitha kwi-ID yakho yeApple kwaye ucofe usebenze
Ukuba usebenzisa i-iOS 10.2 okanye ngaphambili, cofa Useto> iCloud> Sayina uphume. Thepha Sayina kwakhona, emva koko ucofe Susa [isixhobo sakho] kwaye ufake ipassword ye-ID yakho yeApple. Emva koko yiya kuseto> Ivenkile ye iTunes kunye neVenkile yeApp> ID ye-Apple> Sayina uphume
Buyela kuseto kwaye ucofe Jikelele> Cwangcisa kwakhona> Cima umxholo kunye noseto. Ukuba usebenze Fumana i-iPad yam, unokufuna ukufaka i-ID yakho ye-Apple kunye negama lokugqitha
Ukuba uceliwe ikhowudi yefowuni okanye ikhowudi yezithintelo, yifake. Emva koko cinezela u-Delete [device]
Ngala manyathelo, njengoko sisenza nge-iPhone yethu, siza kususa yonke imixholo kwi-iPad yethu kwaye ngoku singayinika, siyithengise okanye nantoni na ngoxolo olupheleleyo lwengqondo lokuba idatha yethu kunye namaxwebhu aya kucinywa isixhobo. Konke oku kuthetha ukuba ukuvala ukusebenza kwezixhobo ze-iOS kuyasuswa (oqhelene naye ufumana i-iPhone yam) kwaye ke umntu obamba i-iPad yethu uya kuba nakho isebenze nge-ID yakho ye-Apple kwaye awuyi kuba nangxaki.
Kodwa kuthekani ukuba asinayo i-iPad ngokwasemzimbeni nathi?
Ukucima nokucima umxholo we-iPad yethu akuyomfuneko ukuba sibe ne-iPad ngokwasemzimbeni, ukubuyiselwa kunokwenziwa kude nangona ndihlala ndicebisa ukuba oku kucinywa kwenziwe ngaphambi kokukhululwa kwisixhobo ukuqinisekisa ukuba yonke into ichanekile kwaye elandelayo umnini akanangxaki yokuyisebenzisa. Ngayiphi na imeko sinako cima yonke idatha nokuba asinayo i-iPad ngokwasemzimbeni Ukulandela la manyathelo alula:
Ukuba usebenzisa iCloud kwaye Fumana i-iPhone yam kwi-iPad, ngena kwi iCloud.com okanye kwi-App yam ye-iPhone kwenye ifowuni, khetha ifowuni kwaye nqakraza Cima. Xa ucime isixhobo sakho, cofa u-Susa kwi-akhawunti
Ukuba awukwazi ukwenza nawaphi na amanyathelo angentla, tshintsha iphasiwedi yakho ye-ID ye-Apple. Oku akuyi kucima ulwazi lomntu olugcinwe kwisixhobo esidala, kodwa kuya kuthintela umnini omtsha ekucimeni ulwazi kwi-iCloud
Ukuba usebenzisa iApple Pay, ungasusa amakhadi etyala okanye okuthenga ngetyala kwi- iCloud.com. Ukwenza oku, khetha Useto ukubona ukuba zeziphi izixhobo ezisebenzisa iApple Pay, emva koko ucofe isixhobo osifunayo. Cofa Cima ecaleni kweApple Pay
Sinokucela umnini omtsha we-iPad ukuba alandele amanyathelo kwicandelo elidlulileyo, Oko kukuthi, ucima umxholo ngokwakhe ngokulandela amanyathelo xa sine-iPad ekhaya. Siyaqhubeka ukuthi kungcono ukuyenza ngokwethu kwaye siphephe iingxaki zaluphi na uhlobo, ke akufuneki ukuba sikhawuleze xa sisenza olu hlobo lokususa imisebenzi. Ulwazi lwethu lubalulekile kwaye asinakusilela ukuzikhusela nokuba siyintoni na isizathu sentengiso okanye nokuba ungangxama kangakanani umnini omtsha we-iPad.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyifomatha njani i-iPad